प्रदेश प्रमुख नियुक्तिबारे के गर्दै छ सरकार ? एमालेसँग किन छलफल भएन ?
राष्ट्रिय सभाको मिति तोक्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब
प्रकासित मिति : २०७४ पुस १८, मंगलवार प्रकासित समय : ०८:३७
काठमाडौं । सरकारले केही दिनभित्रै सातवटै प्रदेश प्रमुख तोक्ने र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा लामो समय किचलो भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेकी छिन् । सरकारले अब निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणाका साथै प्रदेश प्रमुख र उनीहरू बस्ने प्रदेश केन्द्र तोक्ने भएको हो ।
एमालेसँग किन छलफल भएन
एमालेले कुनै पहल नलिए सरकारले आफ्नै हिसाबमा प्रदेश प्रमुख तोकेर जाने नीति लिएको छ । ‘निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै राष्ट्रिय सभाको मिति घोषणा हुनुपर्छ भनेको छ । अर्कोतिर प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश सभाका सदस्यको नामावली सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ,’ देउवानिकट नेता बालकृष्ण खाणले भने, ‘यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रदेश प्रमुख तोक्न छलफलमा हुनुहुन्छ । सबै पक्षसँग कुरा गर्ने तयारी छ । सबैको सैद्धान्तिक सहमति जुट्यो भने राम्रो, नत्र अहिले प्रधानमन्त्री आफ्नै हिसाबमा प्रमुख नियुक्त गरेर अघि बढ्नुहुन्छ । पछि प्रमुखबारे के गर्ने अर्को सरकारले निर्णय लिन सक्छ ।’
सरकारले प्रदेश सभा प्रमुखमा समाजमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूलाई तोक्ने तयारी गरी केही नाममा छलफल पनि गरेको थियो । तर, चर्चामा ल्याइएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले नै इच्छा नदेखाएपछि सरकारले फेरि पार्टी निकटकै प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई बनाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ । ‘पहिले पार्टीनिकट मात्रै भन्दा पनि समाजमा प्रतिष्ठितलाई बनाउने तयारी थियो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर, उनीहरू सबैले इच्छा देखााएनन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखले प्रतिवेदन पाएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा सदस्यलाई शपथग्रहण गराउँछन् । शपथग्रहण गरेपछि मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेशका सदस्यले मतदान गर्न पाउँछन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।
काठमाण्डौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न लगातार आग्रह गरे पनि सरकार